SAF OI TAO MAHAJANGA : Noentanina ireo reny mitondra vohoka tsy hisotro toaka
SAF OI dia fikambanana miady amin’ny fitondrana vohoka isotroana zava-pisotro misy alikaola. 25 avril 2017
Izay rehetra atelin’ny reny mitondra vohoka dia mivantana tanteraka amin’ny zaza ao an-kibony, io no fanazavana nentin’izy ireo nandritra ny famelabelaran-kevitra narahina adihevitra, natao ny tolakanadron’ny alatsinainy teo, tao amin’ny efitrano fivorian’ny Hotel Coco Lodge, Mahajanga.
Betsaka, araka izany, ny fiantraikan’ny alikaola eo amin’ny fiainan’ilay zaza ateraka raha toa ka ho teraka soa aman-tsara ihany. Ankoatra izay dia mety hisy fahatarana ara-tsaina izy raha oharina amin’ny zaza tsy nisotroana toaka tany am-bohoka. Tsy vitsy amin’izy ireny no hita amin’ny endrika ary mitarika fahasembanana mihitsy aza matetika. Maro ny fanadihadian’ny SAF OI, ka nahatonga azy ireo nanatanteraka izao tetikasa izao ho fanavotana ireo renin-jaza mirona amin’ny fisotroan-toaka.
Ny fanetanana mba tsy hisan’ny vehivavy mitondra vohoka hisotro toaka aloha no azo atao hatreto.
Saika mpilatsaka an-tsitrapo avokoa ireo ekipa avy any La Réunion tonga teto Mahajanga, izay nanatanteraka io famelaberan-kevitra io. Ny fiantraikan’ny fisotroan’ny vehivavy mitondra vohokoa ny zava-pisotro misy alikaola no nentina tamin’izany. Fantatra fa ny zazakely ao am-bohoka no hiharan’ny zavatra rehetra. Ny SAF OI dia miara-miasa amin’ny fikambanam-behivavy AVBS eto Mahajanga. Marihina fa efa nanatanteraka izao hetsika izao izy ireo tany Toliara, Antsiranana ary Antananarivo.
Tsy mijanona amin’ny famelabelaran-kevitra ihany anefa ny hetsika atao fa mbola hisy ihany koa ny fanofanana ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo mba hahafahana miroso amin’ny fanentanana. Tsy mora mantsy ny fanatanterahana izany ary hisy ihany ko ny fandraisana an-tanana ireny zaza fantatra fa mizaka ny vokatry alikaola nosotroin’ny reniny nandritra ny naha tao am-bohoka azy.
Tanjon’ny Ben’ny tanàna
Hafaliana ny an’ny Ben’ny tanànan’i Mahajanga raha tonga anantrika io famelabelaran-kevitra io satria nahatsapa ny tenany fa tsy miady irery amin’ny amin’ny fihanaky ny fisotroan-toaka eto amintsika. Fa raha vehivavy bevohoka, hoy izy, no resahana eto dia vokasika ihany ireo ankizy 12 taona noho miakatra izay efa miroso toaka sahady. “Tsy misy tombony ho azo avy amin’ny fisotroan-toaka fa tsy resaka finoana no antony nanoherana ireo dokambarotra momba ny toaka atao io. Araka ny resaka voizin’ny maro any amin’ireo tranonkalam-pifandraisana mantsy dia voalaza fa noho ny tenako manaraka ny finoana silamo no antony nandraisanay io fanapahan-kevitra io”, hoy Andriantomanga Mokhtar Salim.
Ankehitriny tena velom-bolo ny tenany raha vao tonga nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana azy ireo ny SAF OI. Vonona ny hiara-miasa hatramin’ny farany ny tenany amin’io tetikasa io. Sady fanavotana aina sy fitsinjovana ny ny ho avin’ny tanora tsy manan-tsiny izany Tena olana lehibe maneran-tany izy io fa tsy ny eto Madagasikara sy La Réunion fotsiny ihany.